Waa halkee meesha aan Kismaayo ahayn ee doorashada Jubbaland lagu qaban karo? - BBC News Somali
Waa halkee meesha aan Kismaayo ahayn ee doorashada Jubbaland lagu qaban karo?
Qaar ka mid ah musharrixiinta doorashada Jubaland
Inta badan musharixiinta u taagan kursiga madaxtinimada Jubbaland ayaa shir jaraa'id waxa ay ka sheegeen in doorashada lagu qaban doono meel ka baxsan magaalada Kismaayo "haddii maamulka uu xaqiijin waayo in ay dhacdo doorasho xaq iyo xalaal ah".
"Waxaan ognahay in baarlamaankii Jubbaland ee iman lahaa (la soo xuli lahaa) inuu liiskiisa sii qoranyahay, lana rabo in lagu dhowaaqa marka xilliga la gaaro, hab raaca been abuurka ah ee hadda la marayana waa waxbo kama jiraan iyo marin habaabin, wax la aqbali karana ma ahan," Ayuu shirka jaraa'id ka yiri Xildhibaan Cabdirishiid Xiddig oo ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Jubaland.
Waxa uu intaas ku daray "Haddii doorashada noqon weydo mid xaq iyo xalaal ah, musharixiinta waxay xaq u leeyihiin in doorashada ay ku qabsadaan meel alle meeshii ay doonaan".
Waxaan su'aashaas hordhignay Xuseen Axmed Geelle (Sandhool) oo aa falanqeeye siyaasadeed, wuxuuna yiri "Dadka musharixiinta iyo dad kale waxay u arkaan in lagu qaban karo gobolka Gedo ama Bu'aale oo aan weli ku jirin gacanta dowladda, balse waxaan u arkaa in meesha habboon ay tahay Kismaayo, halkaas oo ay dowladdii degentahay".
"Beesha caalamka oo dhan ayaa indhaha ku haya meeshan," ayuu yiri, isaga oo intaas ku daray "in laga yaabo in sababta ay musharixiinta u dalbanayaan meel kale ay tahay in ay suuragal tahay in danahooda ka dhex arki waayeen sida wax u socdaan.
Axmed Madoobe kaliya miyaa ka haray raggii iskaashiga dowlad goboleedyada
Waxaa ku qoran in la qabanayo inta u dhaxaysa 24-ta illaa 30-ka Agoosto, taas oo ay walaac ka muujiyeen musharixiinta; "Macnaheedu waxa ay tahay in musharixiinta oo magaalada iska jooga la yiraahdo doorashada waa la qabtay, taana ma suurtogalayso," ayuu yiri Cabdirishiid Xiddig.
Falanqeeye Sandhool waxa uu qabaa in kaalintii dowladda ay ka maqantahay meesha, taasna ay ugu wacan tahay is faham waaga u dhaxeeya Jubaland iyo dowladda Federaalka. "Balse waxa ay u badantahay in kormeerayaal caalami ah ay meesha tagaan", ayuu yiri.
Dhacdadii ay xalay la argagaxeen dadka ree muqdusho
TOOS Ma laga yaabaa in Mareykanka uu soo rido gantaalka fakaday ee shiinaha?